Karajia sy ny fifandraisana matotra azo nitady amin’ny fomba isan-karazany, anisan’izany amin’ny alalan’ny Internet. Noho izany dia misy ny tambajotra sosialy, Mampiaraka toerana, internet, etc. Iray amin’ireo toerana ny Mampiaraka dia»Mampiaraka maro»olom-pantany. Eny,»Mahafinaritra dia akaiky»tsy afaka mividy trano, zavatra samy hafa, fa koa mba hahazoana mahafantatra, mahita ny vehivavy na ny lehilahy na ho an’ny fanambadiana.
Eo amin’ny pejy an-trano»Hijery akaiky»ny traikefa ianao dia afaka mahita amin’ny sokajy»Top dokam-barotra»sy ny»ara-Dalàna ny dokam-barotra». Araka ny sokajy faharoa, misy farany ny olon-tsotra dokam-barotra. Hamaky bebe kokoa momba ny fomba hidirantsika amin’ny fizarana voalohany namaky amin’ny fipihana eo amin’ny rohy»Ahoana no mahazo ny Ambony.»eo ankavanana (eo mavokely background).
Fisoratana anarana ho»Hijery akaiky»ny Fiarahana no fifadian-kanina ampy, indrisy, mba mahita vady, dia mety mila mba mijery amin’ny alalan’ny am-polony ny mombamomba, ary tsy misy azo antoka fa ny nifidy lehilahy dia tena ho afaka hanana ny fiainana ny mpiara-mitory fa flash samy hafa ny herin’ny maizina ny fihetseham-po — ny fitiavana. Isika, ao amin’ny tranonkala»virtoaly Mampiaraka», ianao dia afaka mahita ny mombamomba ireo mpampiasa izay manana lehibe isan-jaton’ny ny fifampifanarahana azy sy ny anao. Inona no anananao sy ny zavatra mahaliana, amin’ny Ankapobeny, mifanojo, ary ny tarehiny noho ny zavatra lehibe kokoa, ary ny maro hafa.
Manaiky, rehefa avy rehetra, dia mora kokoa ny miresaka amin’ny olona iray rehefa misy zavatra fantatrao momba izany noho ny manomboka mifampiresaka amin’ny aotra.
Sy ny»chat»manome anao ny fahafahana
Inona no takiana aminareo. Nitranga manokana ny fitsapana ho an’ny fifanarahana. Tsy misy SMS fisoratana anarana maimaim-poana
Chat room Fitsapana izany Chat mpanadala mendrika →